“Caawa yaad tahay?” – Bashiir M. Xersi
Date: 12 Jun 2014Author: Bashiir M. Xersi 7 Comments
Mid baa anoo lugaynaya galabta iga horyimid, dabadeena igu yiri: “Bashiirow, caawa yaad tahay?” Markaas ayaan ku iri: “Oo ah?” Ku ye: “Ciddaa tahay caawa ii sheeg?” Saan ku iri: “Inaad taqaan ayaan filayey qoladayda, ee maxaa kaaga xiran?”.
Sidaan ula yaabbanaa asoo iila yaabban, ayuu igu yiri: “War qabiilkaaga ma rabee, Caawa yaad la safan tahay?” Markaa baan ku iri: “Waligeeyba qolo lama safane, ma caawa ayaan la safan?”.
Inta garabka iga dharbaaxay ayuu igu yiri: “Bashiir, inaad madax furan tahay ayaan kuu haystee, sidee wax kaa yihiin?” Markaa baan ku iri: “Nin yahow, inta badan damiinnimada waaba isku ogaaye, haddana, maba iigu sii jirto, saa fax ba ma ihiye, waxaan ku weydiiyey, maxaad ula jeeddaa “Caawa yaad tahay?”, fadlan bal ii jilci, adoo raalli ah?”.
Inta qosol ku dhuftay, ayuu igu yiri: “Bashiir, waxaan kuu haystay in aad ilbax tahay, oo aad la socota dunida iyo waxa ka dhacaya, balse, inaad ka dhacsan tahay ayaan ku arkaa, ee ma sidan ayaan kaa daacada, mise anaad igu ciyaaraysa?”.
Markaa baan ku iri: “War nin ciyaara maahiye, adna dan aan kuugu ciyaaro iima muuqatee, adoon meelo kale isku qaadin, adaa weydiin i hordhigee, bal fool u bixi, adoo mahadsan?”. Inta mar kale i eegay ayuu yiri: “Ma anaa kugu soo qaldmay, mise Bashiirka aan ku mooday ayaadan ahayn?”.
Markaa baan ku iri: “Mid aan ahaadaba, mar walba anigu waxaan ahay Bashiirka ahaan ahay, ee adiga ayaa hadba Bashiir gaar ah kuu soo baxayaa, ka hadba wax ka geddisan Bashiirkii hore, u muuqdo waa adiga, ee aniga ma ahan!”.
Inta hundhursaday, oo hoos eegay, ayuu inta madaxa kor u qaaday igu yiri: “Bashiir, ma waadan ogayn in caawa uu billaabanayo Koobka Adduunka, oo ka furmaya dalka Baraasiil, ee ku yaal Koofurta Ameerika? Mise, aniga ayaad isu kay maahinaysaa, sidii qof aan wax ka ogayn, oo kale waxaad doonaysay inaad iga haddalsiiso?”.
Anoo la yaabban jiirada dheer ee uu soo maray, si iigu sheego Ciyaaraha Kubadda Cagta ee billaabanaya, ayaan ku iri: “Koobka adduunka iyo weydiintii ahayd: “Caawa yaad tahay?” maxaa iska galay” Una sii raacshay: “Ciyaarta iyo caawa qoloda aan noqon, aan se hore u ahayn, maxay tahay?”.
Inta mar kale qoslay, sidii nin wax fiican loogu bishaareeyey oo kale, ayuu igu yiri: “Waxaan rabay inaan ku weydiiyo, caawa ciyaaraha dhacaya, kooxda aad taageersan tahay, si aan u ogaado Qaranka aad taageerto ama ugu yaraan labada caawa ciyaaree midka aad la jirto!”
Waxaan ku iri: “Qosolkaaga badani, ma wuxuu ahaa kaliya in aad niman bawdo qaawan oo majo fiiqfiiqan, ee wareeg hawo ku jirto raacdaysanaya, oo daba ordaya, inaad i tiraa, kee baad taageersan tahay? Oo haddaa, aniga nin daba gaab wata maxaa iga galay, oo nin yahow ma waxaad ii moodday inta aan wax ay qabtaan lahayn ama ugu yaraan inta falan ama la madax maray?”
Inta mar kale qosol ayuu yiri: “Nabee waa lagugu qaldamay, saa sida aan kuu mooday iyo sida aad noqotay kala fog! Hore waxaan kuu moodayey nin bulsheed, balse, hadda waxaa ii soo baxay inaad tahay badaw aan xabba ka ogayn xaaladaha nolosha!”
Markaa baa anoo yaab la dhoollacadaynaya ku iri: “Ma saabaa? Haddaanan Kubadda iyo nimankaa carcaraya aanan dan ka lahayn, ma waxay ka dhigan tahay inaanan waxba ka aqoon nolosha iyo xaaladaheeda? Ku faraxsani inaan taa waxba ka aqoon, waliba aanba badaw ka ahay, ee adigu meesha ay kula gaarto guusheeda kaligaa hayso, anigana ha i soo gaarsiin, waxna ha iga siin!”
“Miyaad carootay” ayuu igu yiri. Markaa baan ku iri: “Ha ka yaabin, ee kaliya, waxaan kaaga warcelshay dhaliishaada iyo dhaleecayntaada aan dhabta ahayn, waliba aan ku qotomin qodob iyo qaab!” uguna soo xiray hadalkii, adoon xumaan ii arkin, ma sii socon karaa, maadaama aan filayo inaan waqti nagu filan wada hadalnay, ujeedkiina aan isla garannay!”
Markaa buu si halhaleel ah igu iri: “Haa, haa, Bashiir. khayr baan isku ognahay” Anna ku iri: “Nabad iyo warsan”
Previous Previous post: Cabdiwaliyoow: Labada Koofur tee kuu daran?!
Next Next post: Dibiga iyo Caana Booraha!
7 thoughts on ““Caawa yaad tahay?””
Pingback: Dibiga iyo Caana Booraha! | HOYGA FAAQIDAADDAA & FALANQAYNTA AAN FAAFREEBNAYN
14 Jun 2014 at 3:42 pm
kkkkkkkkk war bashiir ninka sixun baad u gashay inkastuu kiugu qaldamay asagoon ku xisaabtamin inaad xiiseyso kubada cagta ama aad ugu yaraan tahay nin aad xifaaltankiinu uu ka mid mid yahay kubada waxay reerxamar dhahaan CIMRIGIIS RAAGE GEEL DHALAAYAAS ARKAA KKKKKK AMA NIN ADUUNYO JOOGOW MAXAA ARAGTI KUU LAABAN WALEEWAXBAAD ARAGTAY
Pingback: “Caawa yaad tahay?” | WARAR SUGAN XAQIIQ AH AAN FAAFREBNEYN
28 Oct 2014 at 5:46 pm
Doqonow hadalkaa ba’a , hada waxaan baad qormo kadhigeysaa.